Faayilii - Namni miidhaan irra gahe ambuulaansitti yeroo geeffamu, Maqalee, Onkoloolessa 20, 2021
Itiyoophiyaan Dilbata kaleessaa haleellaa samii irraa gaggeeffamu Tigraay irratti kan itti fuuftee yoo ta’u halleellaa akkasii torban guutuuf jedhu kun, humnootii Tigraayiin harka caalaa to’atan irratti kan gaggeeffamuu ta’e jira.
Haleellaan inni tokko Maay Tsebrii keessa kan jiru bakka leenjii Adda Bilisummaa Uummata Tigraay (ABUT) irratti qiyyaafatee jedhan dubbii himaan mootummaa Itiyoophiyaa Dr.Laggasee Tulluu. Haleellaa inni 2ffaan immo Adwaa keessa kan jiru warashaa waraanaa ABUTn to’atamuu ta’u fi guutummaatti barbadaa’uu isaa ibsii mootummaan Itiyoophiyaa baasee beeksisee jira.
Inni Maay Tsabrii sun bakka ABUT namoota seeraan alaa funaanuun keessatti leenjisuu fi meeshaalee gurguddaa keessatti kuusuu kan jedhan dubbii himaan mootummaa, qiyyaafannaan haleellaa gaggeeffamees fixaan kan ba’e akka ta’e nan mirkaneessa jedhan.Mooraan baqattootaa nannoo sana jiran garu akka hin rukutamne Dr.Laggaseen RSA ibsanii jru.
Dubbii himaan ABUT Geetaachoo Raddaa Roytarsiif akka ibsanti, haleellaan maay Tsebrii irratti gaggeeffame hospitaala iddoo sana jiru cinaa dhahuu waahiloota koo irraa adda baafadhera jedha. Hangan beekuutti namnii midhamees hin jiru jedhanii, haleellaa Adwaa irratti gaggeeffame jedhame irratti odeeffannoo tokko iyyu hin qabu jedhan.
Mootummaan akka waan guutummaan Tigraay waaltaa leenjii ta’etti fakkeessaa jira kan jedhan Obbo Geetaachoon, kun waan hiika hin qabnee fi waaltaalee leenjii jedhaman kanas hin qabnu jedhan.
Gama kaaniin oduu gabaasaan RSA Muluugeetaa Atsebahaa Maqalee irraa akka gabaaseetti, haleellaan iddooo lamatti gaggeeffame kun namoota nagaa irratti miidhaa guddaa geesisuu isaa itti gaafatamtuun biroo Komunukeeshinii bulchiinsa naannoo Tigraay Aaddee Liyaa kaasaa dubbatanii jiru.
Torban dabree kaasee namoota nagaa Maqalee keessaa irratti haleellaan qiyyaafatee xayyaaraan gaggeeffamaa akka ture inni Dilbata kaleessaa itti fuufiinsa isa duraati kan jedhan Aaddee Liyaan, kan ammaan dura looltootaan barbadaa’ee fi saamamee kan ture warshaa wuccuu Almadaa dhabamsisuuf kan gaggeeffame jedhan.
Gama kaaniin naannoo Hospitaala Maay Tsebriitti haleellaan gaggeeffamees namoota nagaa irratti kan qiyyaafatee waliigalaan uummata Tigraay dhabamsisuuf deemsii jiru itti fufuu isaa ibsa jedhan aaddee Liyaa Kaasaa.
Lubbuu namaa fi qabeenya irratti miidhaa guddaan dhaqqabuu isaa ibsanii, sirritti miidhaa dhaqqabee baruuf sararrii qunnamtii waan hin jirreef jecha hin beekamnee jedhan.
Gama kaaniin mootummaan Federaalaa hidhattoota garee shoroorkaa jechuun kan waamu fi Raayyaa Tigraay jechuun kan of-waamaniif waaltaa ajajaa hudeeffame ibsa barreefamaan baaseen, magaala Dasee irraa dhiyeenyatti kan argamtu kutaabar, Boruu meedaa,Borratti,Dahuyaa fi waa Imaa iddoo jedhaman to’achuu isaa ibsee jira.
Wraana naannoo sana ture barbadeessinee ajajaa kutaa waraanaa 91ffaa boojinee kan jedhu ibsi ba’e, dirreen xayyaara Kombolchaa qiyyaafat meeshaa waraanaa jala waan jirtuuf jecha,xayyaaronni akka hin qubannee fi hin kaanee jechuun akeekkachisee jira.
Jiraattonni magaalaalee Dasee fi Kombolchaa nageenya isaaniif jecha mana ofii keessaa akka hin bane, akkasumas godaanuu akka hin qabnee fi qabeenya isaaniis akka eeggatan beeksisee jira.
Itti gaafatamaan waajiira Komuunikeshinii mootummaa Itiyoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu garu, ibsa kanas ta’e dhimmoota hidhata itti qaban kun, gareen shoroorkaa ittiin jedhan injifatamuu gidduu kana isa mudatee aguuguuf hojii oloolaa ofaa jiru jedhan.